အဖုံးပါသော စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Winby
ခိုင်ခံ့သော အနက်ရောင် အကာရှိသော ဖန်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မူရင်းဝါးသစ်သားအဖုံးသည် အသုံးပြုမှုကို မထိခိုက်စေသည့် အနံ့အနည်းငယ်ရှိသည်။ပလတ်စတစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖန်ခွက်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး ဘေးကင်းကာ သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူသည်။သစ်သားအဖုံးနှင့် ဆီလီကွန်အလုံပိတ်ကွင်းသည် လေဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ပိတ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးကာ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
1. စားသောက်ဆိုင်/ဟိုတယ်/အိမ်/ပါတီ စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသော စက်အား ပေါက်ကွဲ/ဖိထားသည်။
2. စိတ်ကြိုက်လိုဂို၊ ပုံစံ၊ အရွယ်အစားနှင့် အရောင်စသည်တို့ကို သင့်ပုံများအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
3. Eco-Friendly နှင့် အဆိပ်မရှိသော အစားအစာ ဘေးကင်းသော အဆင့်မှန် ကိုယ်ထည်။၎င်းတွင် BPA၊ ခဲ၊ ကက်မီယမ် သို့မဟုတ် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အရာများ မပါဝင်ပါ။လုံခြုံပြီး ခိုင်ခံ့သော ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးမှု လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ဆောင်မှုကို အာမခံပါသည်။
အရွယ်အစား D7.2cm*H9.1cm D8.2cm*H9.8cm D9cm*H11cm D10cm*H13cm
အလေးချိန် 225g 345g 420g 630g
အရောင် အဖြူ ၊ အနက် ၊ မီးခိုးရောင် ၊ အရောင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ယခင်- သတ္တုအဖုံးပါသော ဇိမ်ခံဖန်ခွက်အလွတ် ဖယောင်းတိုင်အိုး
နောက်တစ်ခု: ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်ထားသော ဖယောင်းတိုင်အလွတ်-ရှန်ပိန်/အစိမ်းရောင်
A08P လှပသောရနံ့များ ရနံ့ကုထုံး L...
E12 Santa Claus Gift Set ပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင် Chri...
အရည်အသွေးမြင့် အနံ့မွှေးပျံ့သော ဖယောင်းတိုင်